१1641१ देखि १1652२ सम्म 300००,००० आयरिशहरू अ the्ग्रेजी द्वारा दासत्वमा बेचिन्थ्यो - AFRIKHEPRI
1641 देखि 1652, 300 000 आयरिश अंग्रेजी द्वारा दासत्व मा बेचिएको थियो
Iतिनीहरू दासहरू जस्तै आएका थिए। विशाल ब्रिटिश जहाजहरूमा अमेरिकाका लागि बाध्य पारिएका विशाल मानव कार्गोहरू। तिनीहरूलाई सयौं हजारले पठाएको थियो र पुरुष, महिला र सबैभन्दा कान्छो बच्चाहरू पनि थिए। जब उनीहरू विद्रोह गर्छन् वा एक आदेशको अवज्ञा गरे पनि, उनीहरूलाई सबैभन्दा खराब तरीकामा सजाय दिइयो। दासहरूले उनीहरूको मानव सम्पत्तीलाई हातले झुण्ड्याए र दण्डको रूपमा तिनीहरूको खुट्टा र हातहरूमा आगो लगाइदिए। तिनीहरूलाई जिउँदै जलाइयो र उनका टाउको अन्य बन्धकहरूलाई चेतावनीको रूपमा मार्केटमा खम्बामा राखियो। हामीले सबै रक्तपातपूर्ण विवरणहरूको विस्तार गर्न आवश्यक छैन, हैन र? हामी सबै दास व्यापार को अत्याचार संग धेरै परिचित छौं। तर के हामी अफ्रिकामा दासत्वको कुरा गरिरहेका छौं?
किंग्स जेम्स द्वितीय र चार्ल्स मैले लगातार आयरिशलाई फ्याँक्ने प्रयास गरे। प्रसिद्ध ब्रिटिश ओलिभर क्रोमवेलले यस प्रथालाई आफ्नो छिमेकीलाई दोषी ठहराए।
आयरिश दास व्यापार सुरु भयो जब जेम्स द्वितीयले नयाँ विश्वमा दासको रूपमा 30 000 आइरिशका कैदीहरू बेचे। उनको 1625 घोषणा को आदेश दिए कि आयरिश राजनीतिक कैदीहरु लाई विदेश पठाइयो र कैरिबियाई मा अंग्रेजी बसोबाहरुमा बेचे गए। 16 औं शताब्दीको बीचमा, एरिटिगुआ र मोन्टसेराटमा बेचेका मुख्य दासहरू थिए। त्यस समयमा, मोन्टसेराटको कुल आबादीको 70% आयरिश दासहरूबाट बनाइएको थियो।
अङ्ग्रेजी चाँडै अंग्रेजी व्यापारीहरूका लागि मानव पशुधनको सबैभन्दा ठूलो स्रोत बनेको छ। पहिलो नयाँ विश्व दासहरूमध्ये अधिकांश प्रायः श्वेत थिए।
1641 देखि 1652 सम्म, 500 000 भन्दा अधिक आयरिश अंग्रेजी द्वारा मारे गए र 300 000 दास को रूप मा बेचिएको थियो। आयरिश जनसंख्या 1,5 लाख देखि 600 000 सम्म एक दशक मा गिर्यो। ब्रिटिशहरूले आयरिश पुर्खाहरूलाई महिलाहरू र अटलांटिकको अर्को पक्षमा उनीहरूको छोराछोरीलाई विवाह गर्न अस्वीकार गरेपछि सम्पूर्ण परिवारहरू अलग भए। यसले बेपरिवार महिला र बालबालिकाहरू बनाएको असिद्ध जनसंख्या सिर्जना गर्यो। ब्रिटिश समाधान तिनीहरूलाई पनि नीलामी गर्न थियो।
1650 वर्षहरूमा, 100 र 000 बीच 10 14 आइरिशका बच्चाहरू भन्दा तिनीहरूका आमाबाबुबाट छुट्टिन्छन् र क्यारिबियन, वर्जीनिया र न्यु इङ्गल्याण्डमा दासको रूपमा बेचेका थिए। यस दशकको अन्तमा, 52 000 आयरिश (अधिकतर महिला र बालबालिका) बार्बाडोस र वर्जीनियामा बेचेका थिए। 30 000 आइरियर पुरुष र महिलाहरु लाई पनि ट्रान्सफर गरिएको र उच्चतम बोलपत्रमा बेचेको थियो। 1656 मा, क्रोमेलले2000 आयरिश बच्चाहरूलाई जमैकामा ल्याइने र अंग्रेजी बसन्तहरूलाई दासको रूपमा बेच्ने आदेश दिए।
आज धेरै जना मानिसहरु आएर आयरिश दास नामकरण गर्नदेखि जोगिनका लागि तिनीहरू के हुन्: दास। तिनीहरूले " सेवकहरू अनुबंधमा आयरिशको अवस्था वर्णन गर्न। तथापि, 17 औं शताब्दीदेखि अधिकांश अवस्थाहरूमा, आयरिश दास मानव मनुष्यभन्दा बढी केही थिएनन्।
उदाहरणका लागि, अफ्रिकी दास व्यापारको त्यो अवधिको समयमा मात्र सुरु भएको थियो। यो राम्रो तरिकाले स्थापित भएको छ कि क्याथोलिक धर्मशास्त्रले गर्दा अफ्रिकी दासहरू बेवास्ता गरिसकेपछि त्यसपछि अचम्म र खरिद गर्न थप महँगो, अक्सर आयरिश दासहरू भन्दा धेरै राम्रो व्यवहार गरे।
अफ्रिका दास 1600 वर्षको अन्तमा धेरै महंगी थियो (50 स्टर्लिंग)। आयरिश दास सस्तो थिए (5 स्टर्लिंग भन्दा बढी छैन)। यदि एक प्वाइटरले आयरिश दासलाई मृत्यु गर्न वा हरायो भने, यो कहिल्यै अपराध थिएन। एक दासको मृत्यु आर्थिक पछाडि थियो, तर धेरै महान् अफ्रिकालाई भन्दा बढी सस्ता थियो। अंग्रेजी शिक्षिकाहरू छिटो आइरहेका आइरहेका आइरहेका महिलाहरू उनीहरूको व्यक्तिगत आनन्दको लागि धेरैजसो उनीहरूको मुनाफा बढ्दै जान्छन्। दासहरूका सन्तानहरू स्वयं दास थिए, जसले दास मालिकहरूको नि: शुल्क श्रम बल बढायो। भित्री आइरन महिला कुनै पनि तरिकामा मुक्त भए तापनि, उनका छोराछोरीले आफ्ना मालिकलाई दास बनिन्। नतिजाको रूपमा, आयरिश मातृहरू, यो नयाँ अधिग्रहण स्वतन्त्रताको बावजूद, छोटो रूपमा आफ्ना छोराछोरीलाई त्यागे र बासिन्दामा रहे।
समयको बेला, यी महिलाहरू (धेरै अवस्थामा, 12 वर्षीया केटीहरू) प्रयोग गर्ने एक राम्रो तरिकाले सोचेको थियो कि उनीहरूको बजार साझेदारी बढाउन: बस्तीहरूले आयरिश महिलाहरू र केटीहरू प्रजनन गर्न थाले। अफ्रिका पुरुषहरू एक अलग आकारका साथ दासहरू उत्पादन गर्न। यी नयाँ "मुलाटो" दासहरू आइसल्याण्डको तुलनामा उच्च मूल्यमा आउँछन् र त्यस्ता तरिकामा, बसन्तहरूले नयाँ अफ्रिकी दास किन्नु भन्दा पैसा बचत गर्न अनुमति दिए। आयरिश महिलाहरू र अफ्रिका पुरुषहरू पार गर्ने अभ्यास धेरै दशकहरु सम्म चल्दै थियो र धेरै व्यापक थियो कि 1681 मा, एक कानून पारित भएको थियो " बिक्रीको लागि दास उत्पादनको उद्देश्यका लागि अफ्रिकी दास पुरुषहरूसँग आयरिश दास महिलाहरूको प्रजननमा निषेधित "। छोटोमा, यो केवल रोकिएको थियो किनकी यो एक ठूलो गुलाम कम्पनी को मुनाफा संग हस्तक्षेप भयो।
इङ्गल्याण्डले दसौं भन्दा बढी शताब्दीका लागि दसैंको आयरिश दासहरूलाई जहाजमा पुर्यायो। ऐतिहासिक रेकर्डले 1798 को आयरिश विद्रोह पछि, अमेरिका र अष्ट्रेलियामा हजारौँ आइरानी दास बेचेका थिए। त्यहाँ अफ्रिका र आयरिश कैदीहरूको क्रूर दुर्व्यवहार थिए। एक ब्रिटिश जहाजले यसको खाद्य आपूर्ति राख्न को लागि चालक दल को लागि 1 302 दास अटलांटिक मा फेंक दिए।
त्यहाँ कुनै पनि संदेह छैन कि आयरिशले अफगानिस्तान भन्दा अधिक (दाँतको सातौं शताब्दीमा) भन्दा अधिक दासत्वको भेदभावको सामना गर्यो। त्यहाँ कुनै पनि संदेह छैन कि स्वामीले तपाईंलाई क्यारिबियनको यात्रामा तपाईंको सामना गर्छ, प्रायः अफ्रिकी र आयरिश पूर्वको एक मिश्रण हो। 1839 मा, ब्रान्डले नरक शैतानिकमा आफ्नो सहभागिताको अन्त्य गर्न अन्ततः एक्लै निर्णय गरे र दासहरूको यातायात बन्द गर्यो। जबकि यो निर्णयले समुद्री डाकुहरूले उनीहरूलाई चाहने काम गर्नदेखि रोक्न सकेन, नयाँ कानूनले ढिलो ढङ्ग्यो ce रातो आयरिश दुखाइको अध्याय।
तर यदि कोही कोही, कालो वा सेतो, मानिन्छ कि दास अफ्रिकी अनुभव मात्र थियो, त्यसपछि यो सबै गलत छ। आयरिश दासत्व एक विषय हो जुन सम्झन योग्य छ, हाम्रो दिमागबाट मेटिने छैन।
तर हाम्रो सार्वजनिक (र निजी) स्कूलहरू कहाँ छन्? इतिहास किताबहरू कहाँ छन्? किन यो तनहुँ चर्चामा छ? सैकड़ों हजारौं आइतबारको मेमोरीको मेमोरीले अज्ञात लेखकको उल्लेख भन्दा बढी योग्य छ?
वा उनीहरूको कथा अंग्रेजी अंग्रेजी समुद्री डाकू चाहन्थे कुन कुराको सत्य हो? इतिहास (जस्तै récit अफ्रिकी) पूर्ण रूपमा बिर्सिएको छ, जस्तै यदि कहिल्यै अवस्थित छैन।
कुनै पनि आयरिश पीडितहरू आफ्नो आँखा रिपोर्ट गर्न आफ्नो देशमा फर्कन सक्थे। तिनीहरू हराएका दास हुन्। ती समय र पक्षपातको पुस्तक पुस्तकहरू सजिलै बिर्सिएका छन्।
Shaka Zulu Series (1987) हेर्नुहोस्